ဖြစ်ရပ်မှန် Archives - 9style
တနေ့က ကျောက်ဆည် ရွှေသိမ်တော်ဘုရားမှာ ကားခိုးတဲ့ကိစ္စ ကျောင်းသား လူငယ်တွေအတွက် သတိပြုဆင်ခြင်စရာလို့လည်း မြင်မိပါတယ် ၊ အရက်ကြောင် ၊ ဆေးကြောင်လို အခုဟာ ဂိမ်းကြောင်လို့ဆိုရမှာပါ ၊ ကားကို ရလိုမှုနဲ့ ခိုးတာမဟုတ်ပဲ ဂိမ်းထဲကအတိုင်း လုပ်နေတာမျိုးပါ…
ဘာသာကူးပြောင်းလာပြီး ဗုဒ္ဓ ရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာ ဆယ်နှစ်ကြာပျော်မွေ့နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၂ ဦး
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဓိက ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီး ၄ ခုရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်… ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ ပဲဖြစ်ကြပါတယ်…ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ အခြားဘာသာတွေ နတ်ကိုးကွယ်သူတွေနဲ့ ဘာသာမဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါသေးတယ်…ဘာသာတရားအားလုံးကတော့ သူ့ဘာသာနဲ့သူကောင်းကြပါတယ်..ကောင်းတာလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်..မကောင်းတာ လုပ်တာတွေ မလုပ်မိဖို့ တားမြစ်မယ်.. ဒါဘာသာတရားတွေရဲ့…
လာရှိုးဈေးနားဖြစ်စဉ်တခုပါ … စစ်ကားတွေ ဘေးကိုဒေသခံ လူအုပ်ကြီးကပ်လာတာပါစစ်ကားတွေကလဲ ချက်ချင်းထွက်ဖို့ပြင်နေပါပြီ ….. နီးစပ်ရာကုန်စုံဆိုင်တွေက ပစ္စည်းတွေ ကုန်ရောပဲသူထက်ငါ အလုအယက်ပါ အစီအစဉ်မရှိဖြစ်သွားပုံရပါတယ်……. ဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်း မှန်သမျှ လူအုပ်ကမပြီးနောက်မှရှင်းမယ်နော်လို့ အုပ်စုလိုက်ပြောပြီးသူထက်ငါ အလုအယက်ယူပေးနေတာပါပဲ….. စစ်ကားတွေနောက်လိုက်ပေးကြတာကိုကနဲနဲတော့သရုပ်ပျက်သွားတယ်……. တို့…ပြီးရင် ရှင်းမယ်…
ကြီးလာရင် သေနတ်ကိုင်ပြီး ဗမာတွေကို ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး
မန်းတောင်ခြေရှိမိမိတို့ကျောင်း၏ အရှေ့ဘက်ကပ်လျက်ကျောင်းတိုက်မှာ ပလောင်လူမျိုးသံဃာများ အများဆုံး သီတင်းသုံး ကြတယ်။ မြောက်ဘက်ကပ်လျက်ကျောင်းတိုက်မှာ ရခိုင်လူမျိုးသံဃာများ အများဆုံးသီတင်းသုံးကြတယ်။ အနောက်ဘက်ကပ်လျက်ကျောင်းတိုက်မှာ ရှမ်းလူမျိုးသံဃာများ အများဆုံးသီတင်းသုံးကြတယ်။ တောင်ဘက်ကပ်လျက် ကျောင်းတိုက်မှာ ဗမာလူမျိုးသံဃာများ အများဆုံးသီတင်းသုံးကြတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့မှုအရ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအများစုရဲ့ရင်ထဲမှာ ဗမာလူမျိုးတွေကိုမုန်းတီးနေတ အခံဓာတ်…
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊နံနက်ပိုင်းက ဂုတ်တွင်းရဲကင်း တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွင် ကျဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ်သား ဇော်ထက်ဦး အသက် ၂၄ နှစ်အား သြဂုတ် ၁၇ ရက်၊မွန်းလွဲ ၂ နာရီက နောင်ချိုမြို့၊နောင်ချိုဗုဒ္ဓဘာသာသုဿန် တွင် ပို့ဆောင်…
မိသားစုတစ်ခုအတွက် ပေးဆပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပြီး အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်လာချိန်တွင် အရုပ်လေး တစ်ရုပ်ကို အဖော်ပြုကာ အိမ်နောက်ဖေး အဆောင်လေး တစ်ခုအတွင်း နေထိုင်နေရသော အဘွား …. ဒါမျိုးတွေက ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ တွေ့ဖူးတာပါ တကယ်အပြင်မှာ တွေ့တော့ ရင်ထဲ…
အသက် ၈ နှစ်အရွယ် သမီးလေးဟာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အချစ်ပိုကာ လွဲမှားစွာနဲ့ ဂရုစိုက်မှုလွန်ကဲတာကြောင့် အစာအိမ်ထဲမှာ ပြည်တည်နာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးဟာ ဗိုက်အောင့်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားနေရတာ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အခြေအနေပိုဆိုးလာတာကြောင့် ဆေးရုံပြခဲ့ရာ ကလေးရဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာ…
ပြည်​သူရဲ့အသက်​အိုးအိမ်​စည်းစိမ်​ကို အသက်​နဲ့ရင်း ကာကွယ်​သွားတဲ့ စစ်​သည်​​ခြောက်​ဦး
ပြည်​သူရဲ့အသက်​အိုးအိမ်​စည်းစိမ်​ကို အသက်​နဲ့ရင်း ကာကွယ်​သွားတဲ့ စစ်​သည်​​ခြောက်​ဦး😢😢😢😢😢😢 ​နောက်​ဆုံးခရီး ….. အ​လေးပြုပါတယ်​ရဲ​ဘော်​တို့ ​ကောင်းရာသုဂတိလားပါ​စေ ….. မေတ္တာရှင်​ လူမှုကူညီ​ရေးအသင်းနမ့်​ဖတ်​ကာ ကွတ်​ခိုင်​ ရှမ်း​မြောက်​ ….. ၁၉ ရက်​ သြဂုတ်​ လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်​…
နှစ်စဉ်ကျောင်းမှာ ပထမဆုခဏခဏချိတ်လို့ မိဘဆရာတွေက အချစ်ပိုခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး နှင်းရတီထွန်း လက်ရှိ Novel ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာ ၇တန်းတက်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့အထိသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ကျောင်းတက်ဆော့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ သမီးလေး ၁၈.၈.၂၀၁၉ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၆ နာရီစပြီး…
မနေ့ည အဖေဖြစ်သူ လုံအေးက လက်နက်ကြီး ထိမှန် သေသွားလို့ ငိုကြွေးနေတဲ့ စိုင်းစံပွင့်လေး….. မငိုပါနဲ့တော ကလေးရယ် …. တပည့်တော်လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ငိုမိတော့မယ်။ တပ်မတော်က ပစ်ခတ်တဲ့ လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကုန်းဆာရွာခံ လုံးအေးဆိုသူကို…